Articles tagged 'utoile silaigwana'
Chamisa dodges Chigumba bullet 31 July 2018 HARARE - Stung by sharp criticism over its rushed decision to report MDC Alliance leader Nelson Chamisa to the police on possible violation of the electoral law, while sparing his main rival for similar violations, the Zimbabwe Electoral Commission (Zec) was yesterday forced to do some serious da...
'Election results to be posted outside polling stations' 29 July 2018 HARARE - The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) has said election results will be posted outside polling stations after counting has been completed. This comes after MDC Alliance official David Coltart claimed he had “received reliable reports that civil servants who are conducting the poll a...
Zec trains poll agents 25 July 2018 HARARE - The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) will today wind up a two-day training for election agents for all political parties participating in Monday's crucial national harmonised elections. In a statement Zec's acting chief elections officer Utoile Silaigwana said those who will comple...
Zlhr escalates voting booths tiff 20 July 2018 HARARE - The Zimbabwe Lawyers for Human Rights (Zlhr) has written to the Zimbabwe Electoral Commission (Zec) protesting the decision by the electoral management body to change the positioning of voting booths for theJuly 30 harmonised polls. In a letter dated July 17, 2018, Zlhr said the new r...
Silaigwana's appointment as Zec chief elections officer slammed 16 March 2018 HARARE - The appointment of Utoile Silaigwana as the Zimbabwe Electoral Commission (Zec) acting chief elections officer has been described as another unfortunate incident which continues to put into doubt the credibility of Zec through acts of brazen militarisation. Zec appointed Silaigwana as...
Silaigwana appointed acting chief elections officer 7 March 2018 HARARE - The Zimbabwe Electoral Commission (Zec) has appointed Utoile Silaigwana as the acting chief elections officer while the hunt for a substantive office holder gets underway. This comes after Zec cut ties with its chief elections officer, Constance Chigwamba, after she fell out of favour...